အချိန်နှင့် cryptocurrency ( Henry Aung ) - PALnet
အချိန်နှင့် cryptocurrency ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ Cryptocurrency သတင်းများရှာဖတ်ရသည်မှာလည်း တခါတလေ စိတ်အားတက်ဖွယ်ကောင်းသလို တခါတလေလည်း စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မထင်မှတ်ထားသည့် Coin / token များက ဈေးကောင်းလာကြသလို မိမိ မဝယ်ထားမိလေခြင်း ဟူသော စိတ်ကလည်း အတော်လေး ကသိကအောက် ဖြစ်ဟေပါသည်။
Steemit ၏ အီလည်လည် အရသာက ယခု Hive အထိ ပါလာဆဲ။ အခြား Coin / token များက ဈေးနှုန်း တကြိမ်တက်သွားလျင် ပြန်အကျတွင် ဈေးကွက် အားယခင်အခြေအနေပြန်မရောက်အောင် ထိန်းထားနိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Hive ကတော့ အတက်တွင် အခြား coin များလို ထိုးမတက် ပြန်ကျလာလျင်လည်း အခြေအနေထိန်းမထားနိုင်။
အခြားသူငှာများကတော့ Bitcoin / Ethereum များဖြင့် ဘီလီယံနာများ ဖြစ်သွာကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စောင့်စားနေဆဲ။ Hive ဖြင့် တော့ ချမ်းသာနိုင်မည်မထင်။ သို့သော် အတော်အတန် အဆင်ပြေမည်ဟုတော့ မျှော်လင့်ထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Cryptocurrency လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတို့ အဓိက ပြသနာမှာ မိမိအကောင့် ၏ password ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏ password update လုပ်ရင်း ကိုယ့် အကောင့်များ သူများ ဟက်သွားလေမလား စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေကြရပါသည်။ အမှန်တော့ Blockchain password မှာ hack ရန် မလွယ်ကူလှပါ။
ရှည်လျား၍ မတူညီနော စာလုံ အကြီးအသေး ကိန်းဂဏန်း များအား မည်သို့မျှ ဟက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသို့ စိတ်ချရသောကြောင့်လည်း Bitcoin ကို နာမည်ကြီး ရေပန်းစားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တခု ကြောက်ရသည်မှာ ထို Password အား မေ့သွားခြင်း နှင့် မည်သည့်နေရာတွင် save ထားသည်ကို မသိတော့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျင်တော့ မိမိငွေကြေးဆုံးရှုံးရတော့မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်ကြေကွဲ ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်တခု ၂၀၁၃ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ James Howells ဆိုသူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Bitcoin 7500 အား ဝယ်ယူကာ သူ၏ Blockchain wallet တွင် သိမ်းထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က Bitcoin ဈေးမှာ USD$ 150 ဝန်းကျင်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို နောက် Blockchain wallet password အား computer တွင် သိမ်းဆည်းထားကာ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပင် နေမိခဲ့ပါတော့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ တွင် Bitcoin ဈေး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော်လာသောအခါ သူအလွန် ဝမ်းသာသွား ပြီး blockchain wallet အား ဖွင့်ကြည့်ရန် ကြိုးစားပါတော့သည်။
ထိုအခါမှ သူသဘောပေါက်သည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၅ တွင် သူကွန်ပြူတာ အသစ် ချိန်လိုက်သည်ကို သတိရမိပါတော့သည်။ ကွန်ပြူတာ အဟောင်းမှ blockchain password လည်း ပြန်မယူထားမိခဲ့။ ပို၍ ဆိုးဝါးသည်မှာ ထိုcomputer အဟောင်းအား အမှိုက်ပုံတွင် လွင့်ပစ်မိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်မျှ ကံဆိုးလိုက်လေသနည်း။
သူ့အနေဖြင့် နှစ်အတော်ကြာ သူ၏ ကွန်ပြူတာ အဟောင်းအား လိုက်ရှာပါသေးသည် သို့သော် လုံးဝပြန်မတွေ့တော့ပါ။ ယခု BTC ဈေးဖြင့် တွက်လျင် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ကျော်အား လွင့်ပစ်မိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထီပေါက်၍ ထီလက်မှတ်ပျောက်သည် ထက်ပင်ဆိုးပါသေးသည်။ သူ့အနေဖြင့် BTC ဈေးတက်တိုင်း တက်တိုင်း အတော်လေး စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စခဲ့သော BTC သည် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဈေးရောက်ရန် ၈ နှစ်ခန့် အချိန်ပေးခဲ့ရပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုင်ထားသော Hive သည် တနှစ်သား သာရှိပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် Cryptocurrency အား အဆုံးအဖြတ်ပေးသော အရာမှာ အချိန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ အနေဖြင့်လည်း မိမိ Password အား ထိန်းသိမ်းထားရင်း အချိန်တခု သာ ပေးလိုက်ပါ။ Hive သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ စကားပြောလာပါလိမ့်မည်။ ဈေးတက်ခြင်း ဈေးကျ ခြင်းသည် Cryptocurrency ၏ ရှင်သန်နေခြင်း သဘောတရားသာ ဖြစ်ပါသည်။
07/05/2021- Friday - 10;40 Am
myanmar cryptocurrency knowledge sharing palnet leo neoxian creativecoin archon
Password အရေးကြီးဆုံးပဲနော်။ အင်း ထီလက်မှတ်ပျောက်သလိုမျိုး
နောင်တ မရလေရအောင် ခုတည်းက သေချာသိမ်းထားမှ။
James Howells တစ်ယောက် အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲ။
ဗဟုသုတရစရာများ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ဆာဟင် !PIZZA
@kachinhenry! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @myanmarkoko.
အမှန်ပဲ... password သာပျောက်လို့ကတော့ ရူးပြီပဲ.....
@myanmarkoko! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
ဟုတ်သဗျို့ အဲ့ password အတော်အရေးကြီးတယ်။
ယခုလို Crytpto password ဆို ပိုဆိုးသေး။
Facebook password တောင်မေ့နေကြတာ။
ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်လာတော့ သတိထားမမေ့အောင် သိမ်းထားကြရမှာ။
နည်းသည်များသည် အရေးမကြီး.... ငွေကြေ ဖြစ်တာမို့ ဂရုတစိုက် သိမ်းထားရမှာ
ကျွန်တော်တော့ ဟပ်တာမခံရဘဲ Trust Wallet seed ကို အလိမ်အညာ Trust Wallet site တစ်ခုမှာ ထည့်လိုက်မိတာ
ခု Doge ဆုံးရှုံးမှပဲ သတိထားမိတော့တယ်။
အဲ….. ဘယ်လိုဖြစ်... wallet app တွေကလည်း အတုရှိတယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်တော့ password ပဲရှိတော့တယ်လေ